Kunwa Kunwa Kunopa Utano
Posted on January 4, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Kunwa Hutano kune iyo hwiricheya mushandisi
Kubva pawiricheya vashandisi dzimwe nguva havaiti kusimbisa muviri ipapo vashandisi vewiricheya vanogona kuramba vaine hutano kana vachidya zvakanaka uye isu hatigoni kukanganwa kudya zvakanaka. Soda uye shakes hazvisi chete zvinwiwa zvakanakisa zvekunwa asi iwe unogona kunge uchiziva kuti hazvisi izvo zvakanakisa kana zvasvika kune hutano chinhu. Zviripachena pane dzimwe nzira dzekunwira dziviri emagaba ecoca cola pazuva asi nhasi tichakuchengetera nguva yako nesimba. Zvimwe zvinwiwa zvichange zvichiratidzwa hazvizonyanya kunakidza asi ndizvo zvinonyanya kukwezva muviri wako.
ichi drink zvakajairika asi zvakajairika kuvanhu vakuru vanhu vadiki havana moyo murefu wekumirira kuti utonhorere uye tembiricha inonwa. Ichi chinwiwa chine zvakasiyana zvinobatsira kubva kurwisa hosha kukupa yakakosha zvinobatsira. Zvimwe zveizvi zvinobatsira inosanganisira
• Deredza njodzi ye osteoporosis
• Anorwa nekenza
• Kurwisa chirwere chemwoyo
• Inobatsira kudzivirira cavities
• Ine fluoride inobatsira simbisa mazino
Imwe muzana yakaderedzwa-mukaka wemafuta
Wese munhu, kwechikamu chikuru, akaravira mukaka uye vazhinji vevamhanyi kubva kuParalympics vanonwa mukaka futi kunyangwe iri mukaka wemhasuru uchiri mukaka. Pane sarudzo dzakasiyana dze mukaka kunze uko uye vamwe vari nani pane vamwe zvichienderana nezvaunoda. Unogona kusanganisa mumukaka usina mafuta uyu nechose chinenge chinhu uye nekuinwa zuva nezuva. Isu tese tinoziva kuti zviyo zvinoda mukaka saka izvozvi unogona kuzviedza nemafuta akaderedzwa 1% mukaka. Heano mamwe acho zvinobatsira yekunwa mukaka uyu.
• Inodzivisa zvishuwo
• Inodzikamisa huwandu hweshuga yeropa
• Kushandisa calcium
• Inobatsira kudzivirira kubva kune osteoporosis
Kana iwe wakaravira mukaka saka iwe ungangove wakaravira soy mukaka. Iwo angangoita akafanana asi asi, mukaka we soya haubvi kubva kumombe pachayo. Kana iwe uri lactose isingashiviriri saka mukaka we soya ndiyo yakanakisa imwe nzira yekuwedzera kune yako yemazuva ese mbiya yezviyo kana mukaka wako unodiwa neplate yako yemakuki. Ivo zvakare vane matani ezvinonhuwira mumukaka we soy uye akanyanya kufarirwa iwo maamondi uye vanilla. Vamwe zvinobatsira yekunwa mukaka we soy inosanganisira izvi.
• Kunoderedza njodzi yehosha yemwoyo
• Inoderedza cholesterol yakaipa
• Inoderedza njodzi yehutano hwemwoyo
• Inogona kuve nenjodzi yakanyanya yegomarara repazamu
Pakarepo mushure memukaka chinwiwa cheranjisi ndicho chinwiwa chinowanzoitika chiripo pane ino runyorwa. Vanotengesa chaiko kwese kwese uye kunyange chikafu chinokurumidza nzvimbo vanozvitengesa asi iwe unotozviziva izvozvo. Haufanire kuenda kunotenga zvimwe nekuti unogona kuzviita wega nekungori kushandisa maranjisi ivo pachavo. Kana iwe uine muti weorenji saka unofanirwa kunge uchinwa jisi reorenji pane zuva nezuva. Heano mamwe acho zvinobatsira unogona kana ungazive.
• Inobatsira kudzivirira kanzira
• Kuremara kwekuzvara
• Inowedzera hutachiona
• Vitamini c
• Inobatsira kudzivirira cataract
Gadzira chigero chako uye makiki agadzirire, nekuti inguva yekujoinha Moxie shanduko. YeNetflix [...]
Mawiricheya, maWheelchair emagetsi, mobility scooters, uye zvimwe midziyo yekuremara zvinogona kudhura. Nokudaro, vanhu vazhinji vanowana [...]
Sezvo maonero edu nezvekuremara achichinja, isu tiri zvishoma nezvishoma tichiva nzanga yakanyatso nyatso [...]
Inofungidzirwa kuverenga nguva: 4 maminitsi Kuzvimiririra mukufamba ndicho chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo [...]
Chii chakakosha kuziva nezve mawiricheya? Gore rega rega muParalympics, ruzhinji rwe [...]
Inofungidzirwa kuverenga nguva: 3 maminetsi Unoda kudzidza, maitiro ekufanirwa neSSSD Makomborero Mushure me [...]
Inofungidzirwa kuverenga nguva: 5 maminetsi Zvinoita here kuti ubatane nemhuka mune [...]
Inofungidzirwa kuverenga nguva: 9 maminetsi Makambani eWheelchair anoona mamwe mabasa akarasika gore rino kupfuura [...]
Dzimba dzinovaraidza dzeWiricheya dzakasungwa
Mahombekombe uye Kubatika Kwavanopa